जिग्री पाडेले भद्रगोल जस्तै नयाँ टेलिश्रृंखला ल्याउदै , असोज २ देखि नेपाल टेलिभिजनमै हेर्न पाइने ! – Life Nepali
जिग्री पाडेले भद्रगोल जस्तै नयाँ टेलिश्रृंखला ल्याउदै , असोज २ देखि नेपाल टेलिभिजनमै हेर्न पाइने !
काठमान्डौ , हास्य टेलीशृंखला बाट बाहिरिएको भद्रगोल टिमले नया टेलिशृंखला बनाउने भएको छ । मिडिया हबले भद्रगोलको ट्रेडमार्क अफ्नो नाममा दर्ता गरेको कारण यो टिमले नया शृंखला बनाउन लागेको हो । कुमार कट्टेल जिग्री र अर्जुन घिमिरे पाडेको लेखन निर्देशनमा निर्माण हुन् लागेको शृंखलाको नाम भने गोप्य राखिएको छ ।उक्त शृंखला असोज २ देखि नेपाल टेलिभिजनमै आउने बताइएको छ । उता नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने चर्चित हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोल ६ हप्तापछि पुन प्रशारणमा आयो । तर, गत शुक्रबार प्रशारित नयाँ एपीसोडले दर्शकलाई खुशी पार्न सकेको भने देखिएन ।
भद्रगोलबाट निर्देशकद्वय कुमार कट्टेल जिग्री र अर्जुन घिमिरे पाँडेसहितको २१ जनाको पुरानो टिम बाहिरिएपछि मिडिया हबले नयाँ टिम बनाएर भद्रगोल पुनः सुरू गरेको हो । नयाँ श्रृंखलाको निर्देशनको जिम्मेवारी ज्योती काफ्ले (नक्कली बाबुराम भट्टराई) र अशोक धिताल (बाहुन डन)ले लिएका छन् ।गत शुक्रबार प्रशारित २ सय २० औं एपीसोडको कथा पुरानै एपीसोडहरुको निरन्तरता जस्तो गरी बुनिएको छ । तर, दर्शकलाई बाँधेर राख्ने खालको कथावस्तु छैन । साथै, पुरानो टिमका कोही पनि नहुँदा दर्शक निराश बनेका हुन् ।यूट्यूवमा भद्रगोलको उक्त एपीसोड छैटौं नम्बरमा ट्रेन्डिङ छ ।
यसले झण्डै सात लाख भ्यूज पनि पाएको छ । तर, उत्पादकका लागि चिन्ताको विषय के भने यसमा लाइकभन्दा धेरै संख्यामा डिसलाइक आएका छन् । अहिले यो समाचार तयार पार्दा यूट्यूवमा सो एपीसोडमा १७ हजार लाइक र २४ हजार डिसलाइक देखिएका छन् ।यति मात्र होइन, यसमा आएका १२ हजार भन्दा बढी प्रतिक्रियाहरुमध्ये अधिकांश नकारात्मक छन् । अधिकांसले पुरानो टिमलाई फर्काउने माग गरेका छन् । कतिपयले अब भद्रगोल नहेर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।उत्पादक मिडिया हवसँग विविध विषयमा कुरा नमिल्दा जिग्री-पाँडेको समुह भद्रगोलबाट अलग भएको हो ।
उनीहरुले समयमा पैसा नपाएको गुनासो गरेका छन् भने कार्यक्रमको यूट्यूव राइट पूर्णरुपमा आफूहरुले पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मिडिया हब यसमा सहमत छैन ।यसअघि भद्रगोलका अधिकांश एपीसोडहरु ट्रेन्डिङमा पहिलो नम्बरमा आउने गरेका थिए ।तर, पुरानो टिम तितरवितर भएपछि मिडिया हबलाई यसको लोकप्रियता कायम राख्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।यस्ता छन् युटुवमा भद्रगोलमा आएका केहि कमेन्टहरु:थुक्क यो भद्रगोल पनि गोल मत्तै भएछ अबो देखि नहेर्ने । आज बात भद्रगोल हेर्न छोदिंछ, हामी लाई पुरानै कलाकार चाहियो, नत्र आजै बात मीडियाहब Unsubscribe गरिंछ ।
Old is gold भने जस्तै हमिलाइ पुरानो भद्रगोल नै चाहियो । के खाल को हो यस्तो भद्रगोल पुरानै कलाकार चाहियो । यस्तो भद्रगोल आउने हाे भने अब हेरिदैन। वाई हात।हैन यो के तमासा हो ।भद्रगोल को त ईज्जत् जाने भयो । पुराना कलाकार बिना हेर्ने मन लागेन। पुराना कलाकार जति राम्रो पात्र नयाँ देखिएन ।नया भद्रगोल भन्दा त केपि को भाषण सुन्न नै मज्जा आयो, बिल्कुल मजा आएन नया भद्रगोल आआथु । भद्रगोल मा पुराना कलाकार चाहियो । नत्र बहिष्कार भद्रगोल । चिनी बिनाको चिया जस्तो घाँस भद्रगोल ।
Previous देशमा सिर्जना भएको रोजगारीबाट त अरुले नै पो लाभ लिइरहेका रहेछन्
Next भैरहवामै समुद्रको झल्को दिने गरी कृत्रिम समुद्र तयार !